China Edge Protection Akara ibe factory na-emepụta | Tianzheng
Plastic Edge Mpụ nwere ike iji mee ihe ọ bụla ebe a chọrọ mma ma ọ bụ mkpuchi nchebe. Ihe mkpuchi plastik na-enye mgbanwe, mkpuchi, na-eguzogide ọgwụ na ọnọdụ ihu igwe ọ bụla. Ihe mkpuchi ihu plastik nwekwara ike iguzogide oke okpomọkụ niile. Ihe eji eme ihe eji eme ihe bu ihe ndi ozo, nke eji ya na onu ogugu ma obu elu ka o di nma tinyere uzo RV, ugbo golf, ugbo ala, traktọ, ugbo ala, ihe ndi ATV, fiberglass, mpempe akwukwo na ihe ndi ozo.
Anyị nwere ike ịnye ụzọ dị iche iche iji chebe ihu gị na mmetụta na mmebi. Nhọrọ anyị sara mbara nke profaịlụ na-echebe roba kwesịrị ekwesị maka iji ọtụtụ mpempe akwụkwọ, ogwe aka na oke. Anyị na-emepụta profaịlụ ihu nchebe anyị site na ogige dị iche iche iji kwekọọ na ngwa gị na ebe ọrụ gị. Anyị nwekwara ike ịmepụta profaịlụ profaịlụ na nkọwa gị kpọmkwem, n'okpuru usoro kachasị dị ala.
Emebere profaịlụ profaịlụ roba anyị ka anyị nwee ike ịmetụta mmetụta iji chebe ọnụ gị pụọ na mmebi. Ha na-eje ozi iji kpuchido ndị ọrụ site na mmerụ ahụ nwere ike ịnweta site na mkpa ma dị nkọ. Anyị na-arụpụta profaịlụ anyị mgbe niile site na ogige kachasị mma dịnụ. Nke a na-eme ka o doo anya na ndị na-echekwa ihu anyị abụghị naanị maka ojiji, kamakwa ka ọ dịrị. N'agbanyeghị inye nnukwu ike na akwa nguzogide, ndị na-echebe anyị na-agbanwe agbanwe. Nke a na-enyere profaịlụ anyị aka ịbanye gburugburu ọtụtụ akụkụ dị iche iche.
Nwere ike iwunye ọtụtụ n'ime ndị na-eche nche anyị n'ejighị ihe nrapado. Nke a abụghị naanị na - enyere gị aka itinye ma wepu profaịlụ dịka ọ dị mkpa. Ọ na-enyere gị aka iji otu ogologo ọtụtụ ugboro.
Ngwa: Achọpụtaghị ọnụ mma, mma mma
Ngwaahịa: Onwe Grip Edge Trim
Isi ike (Akara A): 67 - 82 Celsius
Ihe: ịkwanyere, Nchara
Agba: Nwa, ọbara ọbara, ọcha, isi awọ, acha anụnụ anụnụ
Iji otu aka, tụgharịa ya ngwa ngwa n'akụkụ ọnụ ma n'otu oge ahụ pịa mkpịsị aka aka nke aka nke ọzọ ebe t / ngwa ngwa zutere nsọtụ. Enwere ike ịkpụ ya n'ụzọ dị mfe ma nwee ike ịdị mkpụmkpụ gburugburu akụkụ siri ike site na ịchapu ngalaba V na obere snips. Enwere ike ijikọ ọnụ ọnụ site na ikpo ọkụ na-ekpo ọkụ na mpempe akwụkwọ na-ekpo ọkụ.
Nke gara aga: Construction Rubber Akara warara
Osote: Na-egbochi Rubber Akara
Edge Protection Akara warara